Heshiis ay Qeyb weyn ka Tahay Puntland oo la Saxiixay & Ahmiyadiisa ….. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Heshiis ay Qeyb weyn ka Tahay Puntland oo la Saxiixay & Ahmiyadiisa …..
Heshiis ay Qeyb weyn ka Tahay Puntland oo la Saxiixay & Ahmiyadiisa …..
Heshiis cusub oo looga dan leeyahay in lagu dhaqan geliyo nidaamyada caddaaladda iyo asluubta ee Soomaaliya ayay ansixiyeen Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka.
Heshiiska waxaa ka soo baxay hab-dhismeed ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku taageeri karaan dib u dhiska nidaamka caddaaladda iyo asluubta ee dalka,kuwaas oo ka mid ah hay’adaha muhiimka ah ee burburay xilligii ay socdeen dagaallada sokeeye.
Munaasabadda lagu saxiixay heshiiskan waxaa goob-joog ka ahaa Wasiirka Caddaaladda ee dowladda Federaalka ah,Mudane. Xasan Xuseen Xaaji iyo dhammaan wasiirrada caddaaladda ee maamul goboleedyada,waxaana bixiyay taageerrada farsamo ee lagu sameeyay hab-dhismeedka Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada (UNDP).
“Tani guul ayay u tahay Soomaaliya,” ayuu Wasiir Xasan Xuseen Xaaji ka yiri xafladda, asaga intaas raaciyey“Waa heshiis ku saabsan sida aan u qaabeyn karno nidaamkeenna caddaaladda iyo asluubta.”
Heshiiskan siyaasadeed oo loo arkoo in uu muhiim u yahay geeddi-socodka dhismaha maamullada Soomaaliya iyo hannaanka Federaalka ah, waxaa uu yimid kaddib labo sano oo wada-tashi dhanka farsamada iyo wada-xaajood u dhaxeeya dowladda Federaalka ah iyo maamul goboleedyada.
Habkan Cusub ee Booliska oo loo dajiyay qaab-dhismeedka mustaqbalka ee adeegyada booliska ayaa waxaa bishii Maarso 2016-kii ku heshiiyay wasiirrada amniga ee dowladda Federaalka ah iyo maamul goboleedyada,Waxaana lagu meel-mariyay Madasha Hoggaanka Qaranka, taageerradanna waxaa lagu xaqiijiyay heshiiskii qaab-dhismeedka amniga qaranka oo la gaaray bishii Abriil, 2017-kii.